Sarimihetsika fohy : mivelatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny RFC | NewsMada
Sarimihetsika fohy : mivelatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny RFC
Tafiditra amin’ny andiany faha-12 ny hetsika « Rencontres du film court » (RFC). Manomboka anio ka tsy hifarana raha tsy ny 29 avrily izao ny fandaharam-potoana, izay ahatarafana fa miatrika fivelarana lehibe ity hetsika ho fampandrosoana ny tontolon’ny sarimihetsika ity. Tsy mijanona eo amin’ny sehatry ny firenena irery intsony ny fifaninanana fa efa misokatra ho an’ny mpifaninana avy any ivelany. Ao ny sanganasa avy any Mali, Ghana, Cameroun, sns. Anisan’ny fivelarana lehibe amin’ity koa ny fiaraha-miasan’ny RFC amin’ny sampandraharaha samihafa, toy ny ofisim-pirenena momba ny sarimihetsika (Omaci). Halefa amin’ny televiziona ihany koa ireo sarimihetsika fohy hifaninanana. Ankoatra ireo rehetra ireo, any Toliara no hanatanterahina ny fizarana ny « Prix du public » ny 2 jona izao.
Fantatra fa nahatratra 92 ireo sarimihetsika fohy nandray anjara tamin’ny fifanintsanana. Mba hanomezana lanja ny ezaka nataon’ny mpanatontosa, noforonin’ny tompon’andraikitra mpikarakara ny RFC ny sokajy « Hors champs » izay hahazo sitraka ihany koa.
Raha tsiahivina, anisan’ny taninketsa nitsimohana mpikirakira momba ny sarimihetsika maro ny RFC. Tsy vitsy ny efa mirotsaka taneraka eo amin’ny fanaovana sarimihetsika ireo nandray anjara tamin’ity hetsika ity.